के तपाईलाई ग्यास सिलिण्डरमा नम्बर किन लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? « Lokpath
के तपाईलाई ग्यास सिलिण्डरमा नम्बर किन लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ?
काठमाडौं । आधुनिक सुविधा जति लाभदायक छन्, त्यति नै घातक पनि छन् । त्यसैले सुविधाको प्रयोग आवश्यक्ता हेरेर मात्रै गनुपर्छ । किनभने यसको धेरै प्रयोग गरेमा खतरनाक साबित हुन सक्छ ।
ग्यास सिलिण्डर सबैको घरमा प्रयोग हुन्छ । यस बिना आजको समयमा केहि पनि हुन सक्दैन । तर तपाईलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी थाहा नहुन पनि सक्छ । आज हामी तपाईलाई ग्यास सिलिण्डरमा किन नम्बर लेखिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
ग्यास सिलिण्डरमा लेखिएको एक विशेष कोड नम्बर रेगुलेटर नजिक तीन पट्टी हुन्छ । ग्यास कम्पनीले यस नम्बर लेखेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँछन् । ग्यासको ट्यांकीमा ए, बी, सी, डी लेखिएको हुन्छ । ग्यासको कम्पनीहरु यी अल्फाबेट्सलाई १२ महिनाको हिसावमा चार भागमा बाँड्छन् ।
ए जनवरीदेखि मार्चसम्म, बी अप्रिलबाट जूनसम्म, सी जुलाईबाट सेप्टेम्बरसम्म र डी अक्टोबरबाट डिसेम्बरसम्म हुन्छ ।
यस कोडले लेटरको सहायताले टेस्टिङको महिना दर्शाउँछ ।
प्रकाशित मिति: २०७७,मङ्सिर,३,बुधबार ०२:००
दुईवटा टाउको भएको सर्पले एकै पटक निल्यो दुई मुसा : सबै चकित, भिडियो भाइरल
काठमाडौं । एउटै शरीरमा दुईवटा टाउको भएको सर्पले एकै पटक दुईवटा मुसा खाएको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ
काठमाडौं । नेटफिल्क्सको सुपरहिट शो ‘१३ रीजन्स वाय’बाट लोकप्रिय बनेका एक्टर टामी डार्फमैनले आफू ट्रान्सजेन्डर भएको र आगामि दिनहरुमा मिहिलाको
सर्पसँग जुधेर बिरालोले बचायो मालिकको ज्यान (तस्बिरसहित)
काठमाडौं । जनावरहरुको बफादारीको बेरेमा हामीले धेरै सुन्दै आएका छौं । बेला बेला हामीले कुकुर, बिराले वा अन्य कुनै घर
मादक पदार्थ सेवन गरेकी युवती वाशिङ मेशिनमा पसेपछि !
काठमाडौं । मादक पदार्थ सेवन गरेर एक युवती वाशिङ मेशिनमा परेकी छन् । नशाको तालमा उनी वाशिङ मेशिनमा परेकी हुन्